Liyini Isu Lokumaketha? | Martech Zone
Liyini Isu Lokumaketha?
ULwesibili, May 28, 2019 ULwesibili, May 28, 2019 Douglas Karr
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, bengisiza amakhasimende akwaSalesforce ngokwakha isu lokuthi angawasebenzisa kanjani amapulatifomu abo anamalayisense kangcono. Kuyithuba elihehayo futhi empeleni kungimangazile. Njengoba ngike ngaba yisisebenzi sokuqala se-ExactTarget, ngingumlandeli omkhulu wamakhono angenamkhawulo weSalesforce nayo yonke imikhiqizo yawo etholakalayo.
Leli thuba leza kimi ngophathina weSalesforce onedumela elihle lokusebenzisa, ukuthuthukisa nokuhlanganisa ukuqoqwa kwamapulatifomu e-Salesforce kumakhasimende abo. Eminyakeni edlule, basanda kuyikhipha epaki… kepha baqale ukubona igebe embonini ebelidinga ukugcwaliswa - isu.
I-Salesforce inikeza izinsiza ezingenakubalwa namacala okusetshenziswa avelele kumathemba okuthi amanye amakhasimende asebenzisa kanjani kangcono ipulatifomu. Futhi iSalesforce Partner yami ingakwamukela ukuqaliswa kwanoma yiliphi isu. Nokho, igebe ukuthi izinkampani zivame ukungena ekuzibandakanyeni ne-Salesforce kanye nomlingani ngaphandle kokunquma ukuthi isu lingaba yini.
Ukuqalisa ukusebenza kweSalesforce akuyona i- Isu Lokukhangisa. Ukuqalisa ukusebenza kweSalesforce kungasho noma yini - kusuka ekutheni uthengisa kanjani, uthengisa kubani, uxhumana kanjani nabo, uhlangana kanjani namanye amapulatifomu akho ezinkampani, nokuthi uyilinganisela kanjani impumelelo. Ukuthola ilayisense nokuthumela ukungena ngemvume ku-Salesforce akulona isu lelo… kufana nokuthenga ibhuku lokudlala elingenalutho.
Uhlelo lokusebenza olwenzelwe ukukhuthaza nokuthengisa umkhiqizo noma insizakalo.
Isichazamazwi se-Oxford Living
A marketing isu uhlelo lomdlalo jikelele lwebhizinisi lokufinyelela kubantu nokubenza amakhasimende womkhiqizo noma wensizakalo enikezwa yibhizinisi.
Uma uthenge a marketing isu kumxhumanisi, yini ongalindela ukuthi bayilethe? Ngibuze lo mbuzo kubaholi kuwo wonke umkhakha futhi uzomangala ngezinhlu zezimpendulo engizitholile… kusukela ekucabangeni kuze kufike ekubulaweni okuphelele.
Ukuthuthukisa isu lokumaketha kuyisinyathelo esisodwa kukho konke uhambo lokumaketha:
Qaphela ukuthi isu lelo landulela ukuqaliswa, ukwenziwa, nokwenza kahle. Uma usungula noma uthenga isu lokumaketha enkampanini - lokho akusho ukuthi bazolisebenzisa lelo su, noma balisebenzise.
Isibonelo Samasu Okumaketha: I-Fintech
Sine-webinar emnandi eza ne-Salesforce, Imikhuba Emihle Ekwakheni Uhambo Lwesipiliyoni Samakhasimende Ezinkampanini Zezinsizakalo Zezezimali, lapho sixoxa ngokwakha amasu ohambo lokumaketha nezinkampani zezezimali. I-webinar yaba ngemuva kokuthi ngenze ucwaningo oluthile embonini ngokuhlukaniswa kwedijithali okwakwenzeka phakathi kwezikhungo zezezimali namakhasimende abo.
Ekuthuthukiseni isu lokumaketha, sikhombe:
Babengobani amakhasimende abo - kusuka ekufundeni kwabo kwezezimali, esigabeni sempilo yabo, empilweni yabo yezezimali, nakubantu babo.
Lapho imizamo yabo yokumaketha yayikhona - ukuvuthwa kwenhlangano yabo ekwakheni ubudlelwano nabo. Ngabe babazi ukuthi bangobani, ngabe babebafundisa noma cha, noma ngabe amakhasimende abo azuzile ngempela ngokufunda kubo, nokuthi ngabe ikhasimende lifinyelela kubo uqobo yini?
Inhlangano ibibandakanyeka kanjani - ngabe isikhungo besicela impendulo, bebengakwazi yini ukuhlola le mibuzo engenhla, ngabe banazo yini izinsizakusebenza zokufundisa nokuhlomisa amakhasimende abo, futhi ngabe lolu hambo belwenziwe lwaba ngolwabantu ngempela?
Ngabe inhlangano ibinazo yini izinsiza - ucwaningo lwethu lukhombise izihloko ezimbalwa lapho amakhasimende abo ahlala ecwaninga ku-inthanethi - kusuka ekuphathweni kwezikweletu, ukuphathwa kwengcebo, ukuhlelwa kwempahla, ukuhlelela umhlalaphansi. Amakhasimende bebefuna amathuluzi e-DIY awasize ahlole, ahlele, futhi asebenzise izimali zawo… futhi nezikhungo abesebenzisana nazo kufanele zibe nazo zonke (noma okungenani zikhombe kumlingani omkhulu).
Ingabe inhlangano ibibonakala esigabeni ngasinye sokuthenga - kusuka ekukhonjweni kwenkinga, ekuhlolweni kwezixazululo, kuya kuzidingo nokukhethwa kwenhlangano yezezimali, ingabe inhlangano ingafinyelela kuzo zonke izigaba ohambweni lomthengi? Ngabe babenamathuluzi nezinsiza zokusiza ukuqinisekisa okutholwe ngumthengi futhi babasize baqhube ukubuyela ekhaya?
Ngabe inhlangano ingafinyelelwa ngokusebenzisa izindlela ezikhethiwe - izindatshana akuzona ukuphela kwendlela. Eqinisweni, abanye abantu abasaziniki nesikhathi sokufunda. Ingabe inhlangano isebenzisa umbhalo, isithombe, umsindo, nevidiyo ukufinyelela amathemba abo noma amakhasimende lapho ekhona Khetha?
Uma sekuqalisiwe, impumelelo izolinganiswa kanjani ngecebo lakho lokumaketha? Ngaphambi kokusebenzisa isu, amandla wokulinganisa kufanele acatshangwe ukuze wazi ukuthi iyasebenza. Uzolinda isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthi iphumelele kangakanani? Uyokwandisa nini imikhankaso yakho? Uyowasonga ngasiphi isikhathi uma engasebenzi?
Uma ungaphendula yonke le mibuzo, lapho-ke kungenzeka ukuthi une-solid marketing isu. Isu lokumaketha lizokusiza ukuthola, ukuthola, nokuhlela ukuthi udinga ithuluzi noma insiza.
Kusuka kusibonelo se-fintech esingenhla, inkampani yakho ingathola ukuthi isayithi lishoda ngesibaluli sokubambisa ngempahla yasekhaya ngakho-ke unecebo lakho lokwakha elilodwa. Lokho akusho ukuthi isu lichaza ukuthi umshini wokubala ubukeka kanjani, uzowuthuthukisa kanjani, uzobanjelwa kuphi, noma ukuthi uzowukhuphula kanjani… lezo zonke yizinyathelo zokwenza umkhankaso ezingenziwa phansi umgwaqo. Isu ukwakha umshini wokubala odinga ukufinyelela kumakhasimende. Ukuqaliswa nokwenziwa kuza kamuva.
Isu yigebe phakathi kwesidingo nokwenziwa
Njengoba ngibonisana nezinhlangano eziningi ngokwengeziwe ne-Salesforce, siyayikhipha epaki ngalezi zingxoxo. ISalesforce isize ikhasimende ukuthi libone isidingo sesisombululo sobuchwepheshe ukusisiza ngemizamo yabo yokuthengisa nokumaketha.
Uzakwethu weSalesforce ukhona ukubasiza ukuthi basebenzise isixazululo sezinqubo namasu abathemba ukuwenza. Kepha ngiphakathi kwalaba bobabili abakhomba igebe futhi ngisebenza phakathi kwamapulatifomu, uzakwethu, kanye nekhasimende ukuthuthukisa i- plan ukufinyelela amathemba abo namakhasimende. Lapho kunokuvumelana phakathi kwethu sonke, umlingani weSalesforce ungena bese esebenzisa isixazululo, bese iklayenti lisebenzisa isu.
Futhi-ke, njengoba silinganisa imiphumela, kufanele silungise isu ngezikhathi ezithile. Esimeni sebhizinisi, lokho kungathatha izinyanga ukufeza, noma kunjalo.
Tags: CRMubuchwepheshe bezezimalimarketingmarketing isu